DNA kewapụrụ usoro Suppliers na Factory |Ndị na-emepụta usoro iche DNA nke China
Ngwa nkewa DNA mmiri
◮Enweghị mmetọ RNase:Ogidi DNA-naanị nke ngwa ahụ na-enye na-eme ka o kwe omume iwepụ RNA na DNA genomic na-agbakwunyeghị RNase n'oge nnwale ahụ, na-egbochi ụlọ nyocha ahụ site na RNase dịpụrụ adịpụ metọọ ụlọ nyocha.
◮Ọsọ ọsọ:Foregene Protease nwere ọrụ dị elu karịa proteases yiri ya, ma na-agbari ihe nlele anụ ahụ ngwa ngwa;ọrụ ahụ dị mfe, na ọrụ mmịpụta DNA nke genomic nwere ike mechaa n'ime nkeji 20-80.
◮Dị mma:A na-eme centrifugation na okpomọkụ nke ụlọ, ọ dịghịkwa mkpa maka 4 Celsius C centirifugation dị ala ma ọ bụ ethanol precipitation nke DNA.
◮Nchekwa:Ọ dịghị organic reagent mmịpụta a chọrọ.
◮Ịdị mma Dị elu:DNA genomic nke ewepụtara nwere nnukwu iberibe, enweghị RNA, enweghị RNase, yana ọdịnaya ion dị oke ala, nke nwere ike izute ihe nyocha dị iche iche chọrọ.
◮Sistemụ Micro-elution:Ọ nwere ike ịbawanye ntinye nke DNA genomic, nke dị mma maka nchọpụta ala ma ọ bụ nnwale.
Kit DNA kewapụrụ stool
Buccal Swab/FTA Kaadị DNA kewapụ ihe
Ngwa PCR dị ọcha
◮ Ọtụtụ mgbake DNA: Enwere ike ị nwetaghachi iberibe DNA dị mkpụmkpụ dịka 60bp yana buru ibu dịka 10kb.
◮ Nnukwu mgbake arụmọrụ: The mgbake arụmọrụ bụ n'ozuzu karịa 80%, na kasị elu nwere ike iru karịa 95%.
◮ Ọsọ ọsọ:Ọ dị mfe iji rụọ ọrụ, enwere ike mechaa mgbake DNA n'ime nkeji iri na ise ma wepụ primer dimer ozugbo na-enweghị mgbake gel.
◮ Safọ: Ọ dịghị organic reagent mmịpụta a chọrọ.
◮ Ogo dị elu: Iberibe DNA ndị ahụ enwetara dị oke ọcha, nke nwere ike izute nnwale dị iche iche na-esote.
Ngwa iche iche DNA FFPE
Ngwa nkewa DNA nke ala
Ngwa Midi DNA DNA (1-5ml)
Ngwa nkewapụ DNA nje
Ngwa Mwepụta Gel
◮Ogologo mgbake DNA dị iche iche:Enwere ike nwetaghachi iberibe DNA dị mkpụmkpụ dịka 30bp yana buru ibu dịka 10kb.
◮Ịrụ mgbake dị elu:Ọrụ mgbake kachasị elu nwere ike iru karịa 80%.
◮Ngosipụta nke obere sistemu:ọ dịkarịa ala 30μl ngwọta elution nwere ike iji maka elution, nke nwere ike ịbawanye ntinye nke iberibe DNA enwetara nke ọma.
◮Ọsọ ọsọ:Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, mgbake DNA nwere ike mechaa n'ime nkeji iri na ise.
◮Ịdị mma Dị elu:Iberibe DNA ndị ahụ enwetara dị oke ọcha, nke nwere ike izute nnwale dị iche iche na-esote.